DAAWO: Dhadhaab-cireed wayn oo la sheegay inuu dhulka kusoo dhici karo dhamaadka sanadkan (Dhib uu gaysan karo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Dhadhaab-cireed wayn oo la sheegay inuu dhulka kusoo dhici karo dhamaadka...
DAAWO: Dhadhaab-cireed wayn oo la sheegay inuu dhulka kusoo dhici karo dhamaadka sanadkan (Dhib uu gaysan karo)
(Paris) 07 Juun 2019 – Dhadaab cireed aad u qara wayn oo uu ballaciisu ka wayn yahay garoon kubad cageed ayaa la sheegay inuu dhulka kusoo dhici karo dhamaadka sanadkan 2019, waloow uu ixtimaalku aad u yar yahay oo uu yahay 1 hal mar 7 kun oo jeer.
Dhadhaab cireedkan oo la yiraahdo 2006 QV89, ayuu ballaciisu yahay 164 cagood, wuxuuna soo dhici karaa 9-ka Sebtembar 2019, isagoo ku jira liiska walxaha meeraysanaya hawada sare ee ay ka walaacsan tahay Hay’adda Hawada Sare ugu qaybsan Yurub ee European Space Agency. ESA ayaa dhadhaabkan 2006 QV89 wuxuu 4-aad uga jiraa 10-ka ugu sarreeysa ee u diiwaan gashan.
Dhadhaab cireedkan ayaa la sheegay inuu u dhulka u mari doono masaafo dhan 4.2 milyan oo mayl. ESA ayaa se qabta inuu dhici karo jaanis ah 1% boqol loosii qaybiyay oo uu dhulka ku hertin karo dhagaxan oo markii ugu horreeysey la arkay 29 Agoosto 2006, iyadoo uu arkay fogaan aragga Catalina Sky Survey.
Waloow ay naadir tahay, misna dhagax cireedyadu marar hore ayay dhulka kusoo dheceen iyagoo dhibaatooyin gaystey, sida mid 1908 qarax wayn ka gaystey meel u dhow webiga Podkamennaya Tunguska ee Yeniseysk Governorate, Russia, kaasoo dhulka ku malaasay kayn ku fadhidey dhul gaaraya 770 mayl oo jibbaaran.
100 sano kaddib waxaa dhacday Chelyabinsk Event, kaasoo Febraayo 15, 2013, isla Ruushka kusoo dhacay, wuxuuna qaraxiisa iyo jugtii uu sababay ku waxyeelloobey 7,200 oo dhisme, isagoo sababay 1,500 oo dhaawac, waloow aanu midkoodna halis ahayn.
Previous articleMa ogtahay inay Sucuudigu hadda kahor bishii Soon-fur KOOWKAB ku khaldeen? (Hadda oo la isku dheggan yahay)
Next articleSIR CULUS: Imaaraatka oo Somalia u daadinaya DABIN halis ah (Dalalka & dadka uu adeegsanayo!)